Jowhar: Musharixiinta oo khudbad-jeedin sameynaya | KEYDMEDIA ONLINE
Jowhar: Musharixiinta oo khudbad-jeedin sameynaya
Berri oo 4-ta November tahay ayaa la filayaa in Xildhibaanada ay doortaan gudoonka Baarlamaanka, iyadoo wali aan la xalin khilaaf ka taagan 9 kursi oo wali la dooran.
JOWHAR, Soomaaliya - Waxaa Maanta Jowhar ka dhacaysa khudbad-jeedinta lix musharax oo isku soo taagay xilalka gudoomiye Baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa 1-aad iyo 2-aad, kuwaasoo shalay la siiyay Shahaadooyinka Musharaxnimo.
Doorashadda ayaa u dhacaysa qaab dadban, iyadoo ay codeynayaan Xildhibaanada cusub ee dhawaan la dhaariyay kuwaasoo 90 gaaraya, balse ay ka dhiman yihiin 9 kursi oo dood ka taagan tahay beelaha loo qoondeeyay dhexdooda.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa ku sugan Jowhar arrimo la xiira ololiisa doorashadda iyo xalinta khilaafka beelaha ee kuraasta dhiman ayuu wadahadal kala leeyahay odayaasha dhaqanka iyo madaxda Maamulka HirShabeelle.
HirShabeelle ayaa ku jirta jawi doorasho oo qasan, islamarkaana Villa Somalia lagu eedeeyay inay afduubtay hanaanka doorashadda, iyadoo si deg deg ah ku dhisaysa Maamul lamid ah kuwii hore ee fashilmay.
Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynihii HirShabeelle ayaa shaaciyay inuu is-casiley, isagoo go'aanka shaqada uga tagey ku saleeyay in la maqli waayay talo uu soo jeediyay ee ah in dib loo dhigo dhismaha Maamulka, oo loo sugo illaa doorashadda heerka federaal ka dhacayso.
0 Comments Topics: hirshabeelle jowhar sheekh shariif